Soo dejisan WinMount 3.5.1018 iyo 3.4.1020 – Vessoft
Soo dejisan WinMount
WinMount – utility awood leh in la files shaqeeyaan iyo Buur ee drives dalwaddii. Software wuxuu taageeraa qaababkan soo socda: RAR, ZIP, 7Z, CAB, ARJ, ISO, TAR, QASHIN iwm feature ugu weyn ee WinMount waa awooda archives virtualization, taas oo kuu ogolaanaysa files oo aan loo baahan saarida. Intii lagu riixo software waxay siisaa awood u leh inay Customize magaca archive, heerka riixo, ayaa loo abuuro archive Sfx, Leave a comment, dhigay sir ah oo la damiyo computer ka dib markii riixo ah. WinMount gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar oo uu leeyahay si fudud loo isticmaali interface.
Gaadiid siisid saxannada dalwaddii
Virtualization of archives
Taageero Wide of qaabab
Ugu Yar isticmaalka khayraadka nidaamka
WinMount Software la xiriira:
Files riixo qalab The functional waxaa loogu talagalay in la archives shaqeeyaan. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto watermarks ee ilaalinta copyright.
English, Français, Español, Deutsch... WinRAR 5.40 beta
Files riixo software ah in la archives of noocyo kala duwan u shaqeeyaan. software wuxuu bixiyaa heer sare ah riixo file oo midaynaysa la sahamisa ee nidaamka qalliinka.
العربية, English, Українська, Français... IZArc 4.2
العربية, English, Українська, Français... 7-Zip 16.04
Files riixo software The qaniinaa, files iyo isticmaalaa hababka riixo ugu wax soo saarka si loo gaaro natiijada ugu fiican.
العربية, English, Українська, Français... PowerArchiver 2015 15.04.03
English, Українська, Français, Español... PeaZip 6 Standard iyo Portable
Files riixo software ah in cadaadin, diinta iyo ka soo fagid buugagga taariikhda oo kala duwan, iyo tirada. software waxay leedahay dhowr ah qalab loogu talagalay howlgalka wax ku ool ah ee kaydka.
Ayna System Qalabka ayaa in lagu furo files la xiran by geedi socodka nidaamka. Waxa ay taageertaa tirtiridda qaladaad nidaamka kala duwan inta lagu jiro shaqada la files.
English, Français, Español, Deutsch... Java 8 u74, 8 u76 beta iyo 9 b104 alfa; JRE iyo JDK
Extensions technology ee howlgalka ka buuxaan qaybaha kala duwan iyo codsiyada ku qoran luqadda Java programming. software The aad bay u sii balaadhiyey fursadaha ka mid ah browser iyo codsiyada free-socda ee shabakadda.
English, Français, Español, Deutsch... Freemake Audio Converter 1.1.8.6
English, Українська, Français, Español... Datacol 5.598
Horumarinta qalab The awood leh si ay u qalabayn raadinta, si loo farsameeyo iyo socdo xaddi badan oo warbixin ka soo internetka. software The kuu ogolaanayaa inaad dhoofiyaan xogta helay inuu qaabab kala duwan.